Ahoana ny fomba hikoriana vary any an-trano?
Angamba efa fantatrao fa lasa mitovy amin'ny sakafo mahazatra ny vary tranainy indrindra, na ho ela na ho haingana dia manandrana manangona ny zava-drehetra izy io, toy ny trano fitehirizana zava-mahasoa ho an'ny vatan'olombelona. Ireo izay manao izany dia tsy afaka misaina intsony ny fihinanana azy ireo tsy misy tsimoka.
Ahoana no hambolena vary any an-trano?
Tsy dia tsotra loatra ny dingana ary tsy mitaky anao hividy fitaovana manokana. Manoro hevitra isika tsikelikely mba handinika ny fomba hivoahana haingana, ary ny tokony hatao amin'ny vary amin'ny ho avy:
Apetraho tsara ny masomboly rehetra ary esory tsy ho rava izany. Miala tsy misy pentina tsy ilaina isika.
Dia sasao tsara. Hikirakirina fotsiny ireo vary ireo varimbazaha izay nianjera tamin'ny faritry ny vilia baolina, satria ny pop-ups ao an-tokantrano dia tsy hitsahatra. Indraindray, manganisa ny asany mandritra ny minitra maromaro ao anatin'ny vahaolana tena goavana amin'ny fanimbana bebe kokoa.
Ankehitriny, momba ny habetsahan'ny varimbazaha varimbazaha. Eto dia miankina amin'ny zava-misy ao an-trano ny zava-drehetra. Raha hafanana amin'ny fahavaratra dia adiny efatra no ampy. Amin'ny toe-javatra hafa, mila adina enina ora izany.
Tadidio fa ny vary dia tsy afaka mitsimoka vetivety, satria mila ny fifohazana ny grains. Nandritra ny enina ora ka hatramin'ny adiny folo, dia naverinay imbetsaka ireo banga ary niraikitra tamin'ny santimetatra niaraka tamin'ny rameva tao anaty vata-by. Apetaho amin'ny gaza avy eo.
Nifoha hanina tao an-trano izahay, ankehitriny dia mila mampitombo azy tsara, izany hoe midadasika ny rano. Saingy kely fotsiny mba handrakofana ny haben'ny santimetre. Amin'izao andro izao isika dia manasa ny halavirantsika rehetra, alohan'ny handravana azy ireo.
Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hitera-moka, saingy mbola zava-dehibe kokoa aza, misy vary any an-trano. Tena ilaina tokoa ny tsimoka dia tsy mihoatra ny 2-3 mm. Manampy tsimoka amin'ny serealy isika, manelingelina ny muesli ary mihinana legioma amin'ny salady.
Tomato Sanka - ny toetra sy ny famaritana ny karazany, ny fitsipika fototra amin'ny fambolena
Ny fomba hanamafisana ny cucumbers eny an-kalamanjana - ny fomba tsara indrindra sy ny safidy
Rahoviana ny famindrana krysantemy amin'ny fararano?
Ahoana no fomba itomboan'ny zana-kisoa?
Tazo tsy misy tavy tsy misy pasynkovaniya ho an'ny tany misokatra
Rahoviana mba hamboly voaloboka eo amin'ny zana-ketsa?
Tavoahangy - Rahoviana ny handavaka ireo biriky ary hamboly?
Famerenana ny rano ao amin'ny aquarium - varimbariana amin'ny fanangonana rano amin'ny oksizenina
HCG aorian'ny famindrana embryo
Toeram-pisakafoanana sy kafe ao Orenburg
Inona ny maha-olombelona, ​​inona no maha-olombelona sy hatsaram-panahy?
Fahaterahana fahatongavana sy fahaterahana
Afobe avy amin'ny papillomas
Fanomezana "Gifts of Autumn" ho any an-tsekoly
Stopoutsin ho an'ny ankizy
Ahoana ny fiantsoana tovovavy?
Atrina ny maso